Machining Aluminium CNC, faritra vita amin'ny aliminioma manokana - Createproto - Createproto Tech Co., Ltd.
SERVICE / Aluminium CNC
Ny serivisy famokarana alimina vita amin'ny alimina vita amin'ny aluminiumProto dia manome anao fikarakarana manodidina fa ny ekipanay dia handinika tsara ny tetikasanao ary hikarakara izany amin'ny alàlan'ny dingana mahomby indrindra amin'ny alimina vita amin'ny masinina mba hanatsara ny fotoana sy ny vidiny.
Azonao atao ny manampy anao mamorona prototypes aliminioma sy faritra aluminium manokana miaraka amin'ireo injenieran'ny tetikasa efa za-draharaha sy masinista hihaona amin'ny famaritana anao.
Raha mitady mpivarotra hanome anao faritra vita amin'ny alimina avo lenta amin'ny machina CNC ianao, ny CreateProto dia iray amin'ireo loharanom-pahalalana mahomby indrindra sy manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana ny masinina vita amin'ny masinina amin'ny milina 3-axis sy 5-axis CNC.
Ny serivisy aliminioma an'ny CNC an'nyPrototo dia miezaka manome anao fomba mahay sy kalitao mendrika miaraka amin'ny ekipa matihanina izay mandinika tsara ny tetikasanao, mitady ny vahaolana tsara indrindra ho anao ary manamboatra ireo faritra voajanaharinao amin'ny fomba mahomby indrindra hamonjy ny fotoana sy ny vidinao.
Ny serivisinay amin'ny milina metaly CNC, indrindra amin'ny prototyping aliminioma, fametahana alimina vita amin'ny aliminioma, famolahana aliminioma, ary hafa noho ireo faritra aluminium, dia mbola manana vy malefaka hafa ihany koa izahay toy ny magnesium, Zinc, Titanium ary vy mafy toy ny Steel, Steel Stainless. no serivisy lehibe rehetra eto aminay.
Ekipa Profesionalin'ny Machining & Fanandramana Aluminium
Ny mari-pahaizana avo lenta takiana amin'ny alàlan'ny alimina vita amin'ny alimina CNC dia hanoro ny fikolokoloana hahazoana fandeferana avo lenta. Ivotoerana famokarana cnc 3-axis haingam-pandeha haingam-pandeha ary ny traikefa lehibe ananantsika sy ny fahalalantsika midadasika dia manampy anay hahatratra ny fandeferana henjana tokoa, hamoaka ny anjaranao alimina araka ny fandaharam-potoana. Ny fahamendrehan'ny fandeferana mahazatra antsika dia manomboka amin'ny +/- 0,005 "(+/- 0.125mm) ka hatramin'ny +/- 0,001" (0,025mm) ho an'ny aluminium aluminium. Ireo mpitantana ny tetikasanay dia hifampidinika aminao amin'ny lafiny rehetra amin'ny tetikasanao ary hikatsaka hanome ny ambaratonga farany avo indrindra azo atao amin'ny milina marina.
Izahay dia namolavola dingana mahomby, marina ary mahomby izay manome ny valin'ny vokatra avo lenta. Ny ekipa mpamolavola sy fandaharan'asa dia mamerina mandinika ny tetik'asa tsirairay, tsy hoe mailaka ihany fa marina koa mba hanombanana ny vidiny, ny fahaizany miasa ary ny fahasarotana hanomezana toky fa mahafeno ny fepetra rehetra amin'ny drafitrao. Izahay dia mamakafaka ny endrikao ary mandray izay ilana manokana toy ny welding, EDM na tariby EDM ilaina. Ity fanamarinana lalina ity dia manome antoka anao handray ny fizotran'ny milina mahomby indrindra amin'ny teti-bolanao, ny fotoana ary ny fitaovana.
Aorian'ny famolavolana ny aluminium aluminium, araka ny takiana, afaka manome ihany koa ny fanodinana faharoa sy ny asa vita amin'ny aliminioma mahazatra toy ny fipoahana fasika, fipoahana balafomanga, famolahana, fanodinana oksidasiana, elektroforesis, chromate, fonosana vovoka ary hosodoko.
Toy ny amin'ny fitaovana hafa, ny famaranana ho an'ny alimo dia natao mba hitehirizana ny efa misy na hampiroborobo ny vaovao izay irina ara-maso na iasa kokoa. Nandritra ny fanodinana dia nifandray tamin'ny mpanjifanay izahay nifandray tamin'ny fepetra takiana taorian'ny famitana. Izahay koa dia mamaly hatrany ny fanontaniana rehetra mandritra ny famitana ny zava-misy mba hahazoana antoka fa hanome anao ny endrika tadiavinao izany.
CreateProto dia manolotra serivisy fampiroboroboana axis mandroso 5 izay mampitombo be ny fari-pahaizana amin'ny famoronana faritra amin'ny endrika sy habe samihafa. Ny milina fanodinana CNC 5-axis dia afaka manamboatra milina avo lenta sy fikosoham-bary amin'ny faritra sarotra kokoa izay hanampy anao hiatrika ireo fanamby sarotra amin'ny famokarana.
Manana ekipa injeniera sy machinista efa za-draharaha izahay afaka manao asa fanodinana CNC mazava tsara amin'ny alàlan'ny famolavolana rindrambaiko teknolojia farany farany hanoratana ny làlan'ny fitaovana mahomby indrindra. Namolavola dingana mahomby sy marina ary mahomby izahay hanosehana ny masininay amin'ny fahaizany feno izay manome valiny ambony.
Tombony amin'ny milina 5-Axis
Ao amin'ny ivon-toeran'ny famaky 5-axis, ny fitaovana fanapahana dia mihetsika manerana ny famaky X, Y ary Z ary koa mihodina amin'ny famaky A sy B hanakaikezana ny sangan'asa avy amin'ny lalana rehetra.
Masinina amin'ny sisiny 5 amin'ny ampahany misy fananganana tokana.
Mamonjy fotoana voafetra, mampitombo ny famokarana milina.
Fahamarinana ambony kokoa sy famaranana miavaka, manatsara ny kalitaon'ny ampahany.
Ny sangan'asa dia tsy mihetsika amin'ny alàlan'ny toeram-piasana maromaro, mampihena ny vidin'ny lesoka sy ny fametahana vidiny, ny fametahana fotoana fohy.
Ny fikolokoloana sy ny fandavahana amin'ny zoro fitambarana. Nohatsaraina ny fiainana sy ny vanim-potoanan'ny tsingerina vokatry ny fanongotana ny fitaovana / latabatra hitazomana ny toeran'ny fanapahana optimum sy ny enta-mavesatra.
Fitaovana fohy sy hentitra kokoa azo ampiasaina. Ny hafainganam-pandeha avoavo kokoa sy ny tahan'ny sakafom-bokatra dia mety ho tratra raha mampihena ny enta-mavesatra amin'ny fitaovana fanapahana.
EDM sy Wire EDM ho an'ny faritra aluminium vita amin'ny milina
Ny EDM (Machining elektrika famoahana herinaratra) dia ampiasaina hanatanterahana ny fanesorana ireo fitaovana avy eny ambonin'ny sehatry ny asa amin'ny alàlan'ny famoahana herinaratra.
Ampiasaina betsaka amin'ny fametahana ny ampahany amin'ny aliminioma ho toy ny fizotry ny milina mpanampy satria ny ampahany sasany amin'ny sarotra dia tsy azo raha tsy amin'ny alàlan'ny EDM. Ny ampahany izay miavaka amin'ny rafitra lalina dia sarotra ny manadio ny zorony, raha tsy mampiasa milina CNC fotsiny ianao dia hamela ny tadin'ny lehibe eo an-jorony, tsy avela izany amin'ny tranga sasany. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fizotran'ny EDM dia azo atao ny mitazona ny sisiny maranitra. Ny fampiharana EDM dia misy ny Cavities Blind (Keyway), pitsopitsony be pitsiny, zoro maranitra, famaranana tsara tarehy, rindrina manify, sns.
Wire EDM dia fomba fanapahana metaly sy fitaovana conductive hafa, izay tariby mandehandeha manaparitaka fitaovana amin'ny fomba voafehy. Ao amin'ny fanapahana EDM tariby, tariby metaly (matetika vita amin'ny varahina na varahina vita stratified) eo anelanelan'ny 0,1 sy 0,3 mm ny savaivony dia ampiasaina ho toy ny electrode izay tena arcs miaraka amin'ilay ampahany hokapaina, amin'izay dia mamorona endrika na endrika tiana.
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny Sinker EDM sy ny Wire EDM dia miorina indrindra amin'ny karazana electrode ampiasaina isaky ny fizotrany, ny zava-misy fa tsy misy lavaka mialoha ny fandavahana ilaina amin'ny Sinker EDM, ary koa ireo tanjaka 3D azon'ny Sinker EDM ahatongavana, Wire EDM ihany no manana ny fahaizana mamokatra ampahany 2D.
Masinina kely ho an'ny faritra Aluminium manokana
Ny masinina vita amin'ny alim-baravarankely vita amin'ny CNC dia matetika ataontsika mba hitehirizana ny volanao sy ny fotoanao amin'ny ampahany 3D sarotra raha oharina amin'ny famokarana amin'ny fomba hafa toy ny fanariana na famolavolana rehefa ny habetsany dia kely noho ny fanariana fa mihoatra ny prototype. Ny famokarana volume ambany dia avy amin'ny Createproto dia ahafahan'ny mpamokatra amin'ny indostria mandeha amin'ny fiara, ara-pahasalamana na ara-pahasalamana hamokatra vokatra avo lenta amin'ny vidiny mirary, ary amin'izany dia afaka mandefa vokatra aloha kokoa noho ny nomanina.
CreateProto dia afaka manolotra fantsom-bidy vita amin'ny alimina vita amin'ny aluminium.
Atombohy amin'ny PROJECT N0W MAIMAIMPOANA
Ny sampan-draharahan'ny milina dia manolotra fahaiza-manao marobe amin'ny milina fanodinana alimina dia iray amin'ireo orinasa manan-danja sy mandroso amintsika. Famokarana fohy ny machining aluminium dia serivisy manelanelana ny prototyping sy ny famokarana faobe omenay.
Rehefa nekena ny endrika dia afaka mampiasa ny haitao mifanaraka amin'izany isika mba hamokarana habetsahan'ny milina kely takiana amin'ny fotoana fohy amin'ny vidiny mirary. Ireo milina dia manome hery, hafainganam-pandeha ary marina; mamolavola geometry fitaovana izahay, jig fametahana ary fizarana faritra ho hazakazaka iray hivoarana mba hahazoana antoka fa hapetraka haingana sy refy tsy miovaova. Ny fari-pitsaranay dia mampihena ny asa tanana faharoa ary misoroka ny fanemorana ny tetikasa.
CNC Aluminium Machining Material Material Miara-miasa Izahay
Aluminium no metaly tsy ferrous be mpampiasa indrindra. Noho ny fahamendrehany sy ny fahaizany mampifanaraka, ary koa ny alloys maro dia maro, ny fampiasana indostrialy, ao anatin'izany ny milina sy ny fitaovana. Ny vidiny ambany sy ny formability dia midika fa mety amin'ny prototyping izy io, ary ny fananana manokana mampalaza azy amin'ny karazana fampiharana sy vokatra rehetra. Ireo faritra namboarina tamin'ny aliminioma dia matetika no tsy lafo satria afaka milina amin'ny fotoana fohy kokoa noho ny metaly maro hafa toa ny vy ary tsy mila famaranana fanampiny.
Ny aliminioma dia misy endrika sy naoty maro samihafa. Ny karazana kilasy aliminioma safidinao dia miankina amin'ny fomba kasainao hampiasa ilay metaly. Raha mila tsipiriany momba ny vahaolana rehetra misy dia azonao atao ny mamaky ny lahatsoratra Wikipedia momba an'io lohahevitra io.
Fandinihana tranga 1: Reflector aluminium vita amin'ny alim-bolan'ny alimina 5 CNC
Ny taratra aluminium dia be mpampiasa amin'ny maodelim-piaramanidina avo lenta, izay iray amin'ireo asa sarotra indrindra amin'ny famokarana fiara. Amin'ny ankabeazan'ny tranga dia manantena ireo mpamorona vokatra fa ny mpanamboatra prototype dia afaka hahatakatra tsara sy handinika ny antsipiriany rehetra mahaliana azy ireo, saingy vitsivitsy monja ireo mpanamboatra prototypa efa za-draharaha no afaka manatanteraka ny vinan'ny mpamorona optika. Azontsika atao ny milaza amin'ny anarana fa ny taratra dia ampahan'ny fisehoan-doha amin'ny headlamp, izay tsy vitan'ny hoe manana optika fotsiny, fa mamaritra ihany koa ny fisehon'ny jiro.
Ahoana no fomba fanodinantsika Prototype Aluminium Reflector?
Fomba fanodinana CNC
Part Name: HDLP-Reflector
Fitaovana milina: Masinina fanodinana CNC 5-axis
Refy: 180mm * 120mm * 100mm
Fanodinana CNC: Fitaovana fanapahana: Machining Fotoana:
Famaranana semi- R3.0 / R2.0 / R0.5 30ora
Famaranana-milina R0.25 / R0.15 50ora
Raha raisina ny kaonty sarotra, ny milina CNC 5-axis dia mbola tsy maharesy ny zava-tsarotra rehefa miasa ny ampahany manontolo. Ireo injenieran'ny fandaharana CNC, izay nahazo traikefa be dia be tamin'ny famokarana jiro prototype, dia hanao fikarohana momba ny fahaizan'ny milina aorian'ny nahazoana ny sarin'ilay endrika.
Raha ny taratra taratra, ny habaka optika manan-danja dia hohodinin'ny fizotran'ny CNC, fa amin'ny lafiny aoriana, misy rafitra mivondrona mitsikera izay sarotra ampiasaina amin'ny fikosohan'i CNC satria hamela boribory lehibe eo an-joron-trano. Raha te handroso dia mila manamboatra electrode varahina ny teknisianina ary mampiasa EDM ho toy ny dinan'ny famokarana fanampiny hanampiana amin'ny fanadiovana ireo zoro. Matetika ity fizotrany ity dia handany fotoana be.
Ankehitriny rehefa vita ny asa, ny dingana farany dia ny fanatanterahana ny famaranana. Ny fanaovana deburring, polishing, plating ary asa asa-tanana aorinan-tanana dia zava-dehibe indrindra, hamaritra mivantana ny endrika farany.
Matetika, ny taratra dia nangatahina ho gloss fitaratra, misy fomba roa hahatsapany an'io vokatra io. Ny iray dia ny poloney, ny poloney dia hamolavola ny faritra mandra-pahazavana fitaratra, tokony hitandrina ianao rehefa manafosafo ny tampon'ny optique satria mila mitazona ny sisiny maranitra ny optika sasany ary mety mamela ny tariby eo amin'ny sisiny ny fizotry ny poloney.
Fomba iray hafa ny plating, famaranana tsara fikosoham-bary ary tsy misy loto ilaina alohan'ny fametahana. Aorian'izay rehetra natao, ny farany dia mety ho mamirapiratra sy tsara tarehy.
Fandalinana tranga 2: Components aluminium prototyping ho an'ny fitaovana fitsaboana
Ity dia tontolon'ny fitaovana fitsaboana ho an'ny Institute of Ultrasonic Instruments izay manampahaizana manokana amin'ny fampandrosoana ny vokatra ho an'ny Portable Color Doppler. Ny tetik'asa prototype dia ny firaketana ny ultrasound portable portable backup izay ny fampiratiana azy dia manana ny fihodinan'ny 360 degre. Izy io dia ny fanavaozana sy ny fandrosoana ho an'ny famolavolana fitaovana fitsaboana ny fampandrosoana ny R&D an'ny mpanjifa.
Mba hiantohana ny lanja maivana sy ny hery hiarovana ireo singa elektronika teknolojia avo lenta, ny mpanjifa dia nisafidy ny milina aluminium ho an'ny maodely prototype iray manontolo.
Ny fanamby lehibe ho an'ity prototype aluminium ity dia ny famolavolana hazavana nefa mahery miaraka amina milina iray manontolo. CreateProto dia nanao ny lalao tamin'ny toerana mety ho an'ny quadruple na mihoatra ny fikirakirana ny habaka. Mandritra ny fizotran'ny prototype haingana, ny fanitsiana sy ny fivondronana dia tena zava-dehibe ary koa ny fitsaboana amin'ny tany. Mivory sy mametaka ny CreateProto alohan'ny hamaranana ny prototype mba hiantohana ny tsipika fivorian'ny tery.
Ny fepetra takiana amin'ny famitana ny aliminioma dia ny sary hosodoko amin'ilay maodely prototype nahatonga azy ho toa ny tena ampahany miavaka toa ny avy amin'ny famokarana faobe, fa tsy maodely prototype mahazatra fotsiny. Mandoko ny tetik'asa izahay araka ny pantone No. izay nomen'ny mpanjifa firafitra tsara. Mandoko azy io ho eo amin'ny fonony aloha misy loko fotsy amin'ny alàlan'ny loko fanoherana toaka. Ny fonony aoriana dia miaraka amina matt mainty mainty endrika avy amin'ny takelaka Mold-Tech mazava ho azy amin'ny loko mahazaka alikaola. Ny tahony dia ao anaty loko toy ny fonony aoriana ary koa loko vita amin'ny fingotra eo ambonin'ny loko mainty mba hahatonga ny tahony hitovy amin'ny tena fihazonana azy. Teknolojia avo lenta Panel ho an'ny fitendry dia anodizing aluminium mba hanana ny fahatsapana matanjaka.
Fandalinana tranga 3: Sombin'ny fiara aluminium aluminium
Raha mpankafy fiara RC ianao dia tokony ho fantatrao fa maro ny singa aluminium ao anaty fiara RC. Ny mpilalao dia mazoto amin'ny tontolo hazakazaka ivelan'ny arabe toa ny rock, izay tsy vitan'ny hoe mitaky hafainganam-pandeha avo indrindra, fa manana fitakiana avo lenta ihany koa amin'ny faharetan'ny fitaovan'ny vatana.
Midika izany fa ny hafainganam-pandeha avo lenta dia mitaky ny hazavan'ny vatana hazavana araka izay azo atao, ary ny faharetana dia mitaky fitaovana matanjaka. Ny ampahany Aluminium no singa be mpampiasa indrindra amin'ny fiara RC, ao anatin'izany ny vatana, ny endriny ary ny kodia kodiarana sns.
Noho ny hevitra isan-karazany hanohizana ny fanatsarana ny fahombiazan'ny fiara RC, ny mpilalao fiara RC dia manatsara hatrany ny famolavolana azy, ity karazana fangatahana ity dia matetika kely dia kely, fa mila mandray ny ampahany ao anatin'ny fotoana fohy ihany koa, satria ireo mpandray anjara tsy te tsy hahita hazakazaka noho ny fiandrasana ampahany. CreateProto ho mpanamboatra prototype izay tsara amin'ny fanomezana fitaterana haingana dia matetika no safidy voalohany amin'ny famokarana faritra aluminium RC, manana traikefa manankarena amin'ny famokarana vokatra kely vita amin'ny alimina izahay, ary afaka mahatakatra sy mahatsapa ny endrik'ilay mpamorona izy ireo.
Fandinihana tranga 4: Kompana masinina Drone / UAV / Robot CNC
Amin'ny famokarana indostrialy ny faritra UAV / Drone ary Robot, dia misy ny olana toy ny fitaovana, ny fizotrany, ny vidiny, ny volan'ny famokarana. Betsaka ny ampahany tsy azo atao famokarana betsaka amin'ny alàlan'ny fampiasana fomba mahazatra, noho izany dia mila mampiasa dingana manokana ho an'ny kojakoja fanodinana kely ianao, mety misy rohy fanodinana boky any afovoany koa. Amin'ny ankapobeny, mampiasa milina CNC, famolavolana silika, fitaovana haingana sy teknolojia hafa izahay mba hahatanteraka ny famokarana volavolan-dalàna. Ity dia fomba tsara iray hanarahana fotoana sy vidiny, hanafainganana ny tsingerin'ny fandefasana vokatra.
Ny fitaovana vita amin'ny aliminioma na karbonina dia ampahany manan-danja amin'ireo singa ireo mba hitaky ny fampiasana ny masinina avo lenta sy ny masinina avo lenta izay miasa ao anaty clamping afaka mameno ny fizotrany manontolo, nefa koa manana fitaovana famakiam-boky, ary manana ny fitaovana mandeha ho azy manova ny asany. Indraindray ilaina ny mahatsapa ny fifehezana ny rohy amin'ny famaky telo na maromaro mba hiantohana ny famolavolana ilay fitaovana amin'ny faritra sarotra.
Io fitakiana fanakianana io dia tsy isalasalana fa fanamby lehibe ho an'ireo mpanamboatra faritra. Rehefa tonga ny mpamorona vokatra mba hanafatra ampolony amina ampolony dia matetika sarotra ny mamaly, ka izany no mahatonga ireo mpamatsy ny famokarana matetika mila mitodika any amin'ireo vahaolana namboarina manokana. Noho izany, ny famokarana volume ambany dia mifandray akaiky amin'ilay mpanamboatra prototype, ny famokarana tsara dia manana traikefa manankarena sy malefaka hatrany amin'ny fanomezana vahaolana tsara ho an'ireo fepetra takiana tsy manam-paharoa.
Prototyping haingana sy famokarana, Cnc Prototyping haingana, Prototyping haingana, Serivisy fanaovana pirinty 3d sy Prototyping haingana, Cnc Prototyping, Prototyping haingana,